January 21, 2021 - Achawlaymyar
သင့်ရဲ့ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို နဂိုထက် နက်မှောင် ထူထဲလာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
February 25, 2021 January 21, 2021 by Achawlaymyar
မျက်ခုံးမွှေးကလည်း သင့်မျက်နှာလှပစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ ။ မျက်ခုံးထူထူလေးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်က မိတ်ကပ်မ လိမ်းရင်တောင် သူ့ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက ထင်ရှားပြီး လှပနေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မျက်ခုံးမွှေးပါးသူတွေအတွက် ထူထဲ နက်မှောင်လာစေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် (၁) ကြက်သွန်နီရည် ကြက်သွန်နီရည်ကတော့ ဆံပင်သန်စေသလို မျက်ခုံးမွှေးအတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကြက်သွန်နီရည်ကို မျက်ခုံးပေါ်မှာစွတ် ပါ ပြီးရင်တော့ ၅ မိနစ်လောက် နှိပ်ပေးပါ။ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရင် မျက်ခုံးမွှေးတွေ ထူထဲ ၊ရှည်လျားပြီး နက်မှောင်လာပါလိမ့်မယ် (၂) နွားနို့ နွားနို့ကတော့ မျက်ခုံးမွှေးတွေ မကျွှတ်တော့အောင် အဓိက အားပြည့်ပေးတာပါ။ နွားနို့ကို နားကြပ်တံလေးတွေမှာစွပ်ပြီး မျက်ခုံးပေါ်သု ပ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ နွားနို့ခြောက်တဲ့အထိထားပေးပြီးမှ ရေပြန်ဆေးချရပါမယ်။ (၃) ကြက်ဥအနှစ် ကြက်ဥအနှစ်မှာ မျက်ခုံးမွှေးတွေ ရှည်လျား ထူထဲလာစေမယ့် ဗီတာမင်တွေ … Read more
ရာသီသွေး အမျိုးအစားကနေသိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ…
January 21, 2021 by Achawlaymyar
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ အများစုက ဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောတတ်ကြပါ ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရာသီသွေးအခြေအနေ တစ်ခုခုထူးခြားတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိနေတ ယ်ဆိုတာကို သတိပြု ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းတာဟာရှက်စရာမဟုတ်သလို ရာသီသွေးအမျိုးအစား အလိုက်သိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအြေ ကာင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ပန်းရောင်သမ်းနေရင် ရာသီသွေးဟာပုံမှန်ဆင်းနေကျအရောင်ထက် သွေးအရောင်ဖျော့ပြီး ပန်းရောင်ဘက်သမ်းနေတယ် ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမဟော်မု န်းနည်းလွန်းနေ တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ အဲဒီလို ရာသီသွေးပန်းရောင်သမ်းတာဟာ မကြာခဏဖြစ်တယ်၊ သွေးအရောင်ဟာသိသိသာ သာဖျော့လာတယ် ဆိုရင် အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးကျဲလွန်းရင် သွေးအရောင်ဖျော့လွန်းပြီး ရာသီသွေးဟာခပ်ကျဲကျဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အာဟာရမမျှတဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ် ပွားနိုင်ခြေရှိလို့ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီး လည်းစိတ်မပူပါနဲ့၊ သားအိမ်ပြွန်ကင်ဆာ၊ … Read more
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်…
လူတစ်ယောက်စိတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲလို့ သင်တွေးမိနေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို မျက်လုံးတွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ သတိမထားမိလို့သာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာပါ …။ အပြုအမူ၊ အမူရာတွေအကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့ သြစတေးလျ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Alan Pease က လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို သူ့ရဲ့အမူရာတွေကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ၁. မျက်လုံးမှိတ်ထားရင် လူတစ်ယောက်က မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စကားပြောနေမယ်ဆိုရင် သူက တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားချင်လို့ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ သင့်ကိုကြောက်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ သင့်ကို အနားမှမရှိစေချင်တာပါ။ သင့်အနားမှာရှိနေရင် သင့်အတွက်စိတ်ပင်ပန်း စေတယ်။ သူ့မျက်လုံးကို မှိတ်ထားတဲ့အခါ သင့်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးလေ …။ ၂. ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ကွယ်ထားရင် ကလေးဘဝတည်းက အတန်တန်သတိပေးခံခဲ့ရတဲ့ အပြုအမူပါ။ ဘာစကားမှမပြောချင်တဲ့အခါ လူတွေက အလိုလိုသူတို့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ကာထားတတ်ကြပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိလည်း … Read more
Crush နဲ့အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေစေမယ့် SMS ပို့နည်းလေးများ
သင့်အနေနဲ့ ရုတ်တရက်ကြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြွေသွားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းမယ်။ သူနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်၊ သူသတိထားမိအောင် သူရဲ့ပို့စ်လေးတွေကို react တွေလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် သူ့ကို မက်ဆေ့တွေ ပို့မှာပေါ့။ တခြားဟာတွေ လုပ်နေတုန်းက သိပ်အရေးမကြီးသေးပေမယ့် မက်ဆေ့ပို့တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကချည်း တစ်ဖက်သတ်မဖြစ်နေဘဲ သူ့ဘက်ကလည်းပြန်ပို့တာ လိုချင်တာပေါ့။ ပြီးတော့ သူ့ဘက်က typing လို့ပေါ်နေပြီး ကိုယ့်ဆီကို လက်မကြီးပဲပြန်ရောက်လာရင် နေရာမှာတင် အသည်းကွဲရတော့တာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်က စာတွေအများကြီးပို့လိုက်ပြီး လက်မပဲပြန်ရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် သူ့ဘက်က သေချာပေါက်ပြန်ပြောလာစေမယ့် မက်ဆေ့ပို့နည်းလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပြီနော်။ အခုပဲ လှုပ်ရှားလိုက်တော့နော်။ (၁) သူ့ရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အခုအချိန်မှာ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူ မရှိသလောက်ပဲထင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ခရပ်ရ်ှကို မက်ဆေ့ပို့မယ်ဆိုရင် စားပြီးပြီလား၊ ဘာဟင်းနဲ့စားလဲ … Read more
စီးပွား တက်မည့်အိမ် (မဖတ်ထားရင် နောင်တရမယ်နော်)
မိမိအိမ်မှာ လာဘ်ပွင့်ငွေဝင်ပြီး အိမ်အေးချမ်းအောင် ဒါတွေလုပ်ဆောင်ပါ …။ (1) ဘုရားပန်း နှင့်သောက်တော်ရေဆွမ်း ဆီမီးအမြဲကပ်ပါ။ ဘုရားပန်းမနွမ်းပါစေနဲ့။ ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများမပူပါစေနဲ့။ သောက်တော်ရေကို သတိရတိုင်း ကပ်ပေးပါ …။ (2) ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ်၊ ခြံစောင့်နတ်၊ အိမ်ဝန်းအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်စောင့်ရှောက် ကြသော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ၊ မြင်အပ်မမြင်အပ် သတ္တဝါများ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပေးပါ …။ (3) အလွန်ကံညံ့ လာဘ်ပိတ်နေလျင် ညသန်းခေါင် ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပါ။ ည ၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်းသည် နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ လူ့ပြည်သို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုချိန်ဖြစ်၍ ညဘက်ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ဆုတောင်းလျင် ပို၍ ဆုတောင်းပြည့်ဝ စေပါတယ် …။ (4) အိမ်မှာ အဟောင်းအစုတ်တွေ မထားပါနဲ့။ အချိူ့အိမ်တွေမှာ နှမြောပြီး ထားတတ်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ … Read more
” မိန်းမ မာယာသဲကိုးဖြာ” တဲ့၊ ယောင်္ကျား မာယာကျတော့ မန်းကျည်းပင် နှစ်ပင်လောက်က မန်ကျည်းစေ့တွေလောက် ရှိတယ်တဲ့။ သဲနဲ့ မန်းကျည်းစေ့နဲ့ သဲက ပိုများတာ မှန်ပေမယ့် မန်ကျည်းပင်ကလည်း တစ်နေ့တခြားကို တိုးလာတာပါ။ ဒါကလည်း ပုံပမာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လှည့်စားတတ်တဲ့ သူက ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် လှည့်စားတတ်သလို မလှည့်စားတတ်တဲ့သူကလည်း မလှည့်စားတတ်ပါဘူး။ အခုဒီမှာတော့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်က သင့်ကိုလှည့်စားနေသလားဆိုတာကို သိနိုင်မယ့် အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ၁။ သင်ကြားချင်တာပဲ အမြဲပြောပါတယ်” မိန်းကလေးတွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးများဟာ သင်ဘာကြားချင်သလဲဆိုတာကို သိကြပြီး သင်ကြားချင်တာကိုပဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ သင့်နှလုံးသားကို အရည်ပျော်စေမယ့် စကားတွေ ကြားရဖန်များနေရင် သတိထားပါ။ မကြာခင် လူပါအရည်ပျော်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ၂။ … Read more